Ezokuphepha - AOOD Technology Limited
Izinhlelo zokuphepha zanamuhla ziyakhula ziyadingeka kwizicelo zezimboni, ezentengiselwano nezamasosha ezifana nokuphepha kwezohwebo nezengqalasizinda, ukuphepha kwezokuthutha kanye nombono wasebusuku, izikebhe zokungcebeleka, ukubhekwa kwezicishamlilo, ukubhekwa kwamasosha nokutholwa nokulandelwa. Ukufeza ukubhekwa nokuqondiswa kokutholwa nokulandelwa kwenhloso, uhlelo lwevidiyo olufanayo beludinga ukwakhiwa ukukhiqiza izithombe noma ukurekhodwa. Enhliziyweni yalezi zinhlelo zevidiyo eziyinkimbinkimbi, wonke amandla, amasiginali nedatha kudluliswa ngohlelo lwamaslip ring. Inikeza ukudluliswa okungapheli okungama-360 ° kwenani elikhulu lezithombe noma ukurekhoda kusuka engxenyeni ejikelezayo kuye engxenyeni engaguquki futhi kugweme izintambo ezisontekile ngenkathi zijikeleza. Kungakho uhlelo lwevidiyo yemodemu lungukusetshenziswa okudingeka kakhulu kwamasongo okushelela.
Imikhiqizo letihlobene: Izindandatho zeCapsule Slip, Izindandatho zeSlip Definition High, Izindandatho ze-Ethernet Slip